I-Hielscher Ultrasonics ikunikeza ububanzi bomkhiqizo obanzi wezesekeli ze-ultrasonic zokunikezela ngokuqondile nangokungaqondile kwama-sampuli amancane we-lab ekukhiqizeni okugcwele kwezebhizinisi. Thola ngezansi ukubuka okuningiliziwe phezu kwe-sonotrodes yethu, ukugeleza kwe-reactor kanye nezesekeli kokubili, ukukhulumisana okuqondile nokungaqondile.
I-Ultrasonic Sonotrodes ayaziwa nangokuthi i-ultrasonic ithiphu, iphenyo, uphondo noma umunwe. I-Hielscher inikeza ama-probe ase-ultrasonic ayenziwe nge-titanium, ingilazi kanye ne-ceramics kanye namasayizi amaningi (diameter) ukufanisa isimo sakho senqubo (isib. Ukucubungula izinga, izinga lokushisa eliphezulu, ibanga lemithi yezokwelapha njll) ngokugcwele.
Khetha usayizi we-sonotrode olungile: Ububanzi be-sonotrode buhlobene nomthamo wamanzi kanye nokucubungula okukhulu. Ngokusebenzisa i-sonotrode ene-surface encane (ububanzi obuncane), amandla e-ultrasound akhulunywa kakhulu futhi ngaleyo ndlela avuke kakhulu, okwenza kube nokuphakama okukhulu, kuyilapho i-sonotrodes enomhlaba omkhulu, amandla e-ultrasonic adluliselwa endaweni enkulu kunazo zonke i-amplitude ephansi. Amamitha we-sonotrode amakhulu kakhulu asetshenziselwa ukucubungula imiqulu emikhulu, kodwa anikele amandla aphansi.
Ukuqina kwe-ultrasonication kungumsebenzi we-input input ne-surface sonotrode endaweni. Ukufakelwa kwamandla okunikeziwe okusebenzayo kusebenza: indawo enkulu ye-sonotrode, i-intensity ye-ultrasound.
Ngezikhukhula ezengeziwe ezitholakalayo, ukukhishwa kwe-ultrasonic e-bench-top kanye ne-sonotrodes yezimboni kungase kukhule noma kunciphise. I-Hielscher inikeza ubukhulu obuhlukahlukene bokusikisela okuvumela ukukhethwa okukhulisiwe kweprosesa yakho ye-ultrasonic.
Amadivayisi we-Ultrasonic Lab
Ama-lab ultrasonicators we-Hielscher yi-range ebanzi yezimpondo ze-ultrasonic, amaseli wegeleza, ama-reactors nezesekeli ezitholakalayo. Idivayisi ye-ultrasonic UP200St iyiyunithi eyisisekelo ehambisana nezici ezingaphenduka kusuka kudivayisi ejwayelekile yohlobo lweprobe (elisetshenziselwa i-sonication eqondile eqondile) ngezesekeli ezifana ne-VialTweeter noma i-TD_CupHorn ibe ithuluzi elinokwethenjelwa le-sonication eqondile engaqondile.
I-sonotrodes ehlukahlukene nezesekeli zigcwalisa uhla lomkhiqizo
I-Bench-top & Ama-ultrasonicators asezimboni
Ukuqhutshwa kwe-ultrasonic yeminyango ephakeme ebhentshini-phezulu kanye nesilinganiso sezimboni, i Ama-ultrasonicators asezimboni nge 500W kuya ku-16kW inamanzi okuthiwa yi-block sonotrodes futhi I-Cascatrodes ™. I-sonotrode ye-blocks ibonakala ngokuba nomhlaba owodwa ongqimba, ohambisa ukukhipha emanzini. I-Cascatrodes ™ iyingxenye ye-sonotrode efaka amasongo amaningana ukuze inikeze indawo engaphezulu enezingqimba ezithuthukisiwe, ezithumela ukuchithwa kwe-ultrasonic ku-liquid.
Ku-bench-top kanye ne-ultrasonicators yezimboni, ukukhishwa kwamandla we-ultrasonic nge-probe kunganda noma kunciphise ngokusebenzisa i-booster. Ama-boosters angakwazi ukukhulisa noma ukunciphisa ukuphakama futhi ngaleyo ndlela ithuluzi elibalulekile lokulungisa ukuphakama kwe-ultrasonic kanye nokuqina kwamanani okusebenza.
Idivayisi ye-ultrasonic UP200St ifakwe i-sonotrode S26d2.
Izinqubo ze-Ultrasonic Liquid:
ama-flow ultrasonic cells
Ama-ultrasonic flow-ngokusebenzisa amakamelo okugubha ayatholakala kuma-lab ultrasonicators kanye namadivayisi we-industrial ultrasonic.
I-reactor ye-ultrasonic yenza ukuba ikhulise isikhala esimisweni esivaliwe – noma ngemodi yokugeleza (i-pass eyodwa noma i-recirculation) noma i-sonication ehlanganisiwe ekamelweni.
Kusetshenziswa uhlelo lokugeleza kwe-ultrasonic, kuyadingeka lapho imifudlana ephezulu yevolumu kanye / noma izinto eziphezulu ze-viscous zenziwa sonicated. Ukugeleza okuqhubekayo ngohlelo kunezinzuzo eziningana ngaphezulu kokucutshungulwa kohlobo lwe-batch:
1. Ngokucubungula kwe-ultrasonic inline, ukucubungula
liba likhulu kakhulu njengoba zonke izinto zidlalwa ngaphakathi ekamelweni ukuya endaweni ye-cavitation. Lokhu kuholela ekusetshenzisweni kwamanzi okufana okuhambisana nokukhishwa kwekhwalithi ephezulu.
2. I-ultrasonication eqhubekayo iholela ekusebenzeni okuphezulu kakhulu
njengoba yonke into idlula indawo yokucwaninga ekamelweni lokugubha.
3. Ngokulungisa izinga lokugeleza futhi ngaleyo ndlela isikhathi sokugcinwa kwezinto ezibonakalayo ku-"cachitational spot" cavitational, i
ingalawulwa futhi igcinwe. Ama-flow-cell aphethe ijaji lokupholisa kanye nokufaka okukhethwa kukho kokushisa komthengisi wokushisa ukugcina izinga lokushisa elidingekayo.
4. Inqubo yomsindo ohlelweni oluvaliwe iqinisekisa
, isib. lapho usebenza ngezinto eziyingozi (njengezinambuzane eziyingozi, ezithathelwanayo, ezithathelwanayo, noma ze-pathogenic).
Nge-sonication nge-flow-through reactor, ukucubungula kweziphuzo eziphezulu ze-viscous (kufika ku-250.000cP) kungenziwa kalula. I-Hielscher flow cell reactors zenziwe ngensimbi engenalutho noma ingilazi futhi ifakwe ibhokisi lokupholisa ukulawula ukushisa kwenqubo. Zonke izindlu zamaseli ezigeleza zicindezela. Ama-processors ultrasonic aseHielscher angakwazi ukusingatha kalula uketshezi nge-viscosities eliphezulu (isib. Ibhotela le-peanut, uju, okungcolile, uhlanganise unamathisele). Izilinganiso ezihlukahlukene ze-reactor (ivolumu) kanye ne-geometry zitholakalayo ukufanisa izidingo ezithile zokusebenza.
Direct vs Indirect Sonication
I-sonication ngokuqondile kusho ukuthi i-ultrasound ihlanganiswe ngokuqondile ne-liquid processing. Ukuze sonication ngqo, probe-hlobo ultrasonicators zisetshenziselwa, lapho i ultrasonic phondo / sonotrode ibhaliswe medium. Amandla adluliselwa nge-sonotrode / probe ngqo kwisampuli ngokuqina okukhulu ukuze isampuli iqhutshwe ngokuqinile futhi ngokushesha.
Igama le ukukhulumisana okungaqondile ichaza ukuhlanganiswa kwamagagasi e-ultrasound nge-bath ultrasonic odongeni lwe-tube test kulesisampula. Njengoba amagagasi e-ultrasonic kufanele ahambe ngamanzi okugezela kanye nodonga lwe-beaker ukuqina kwe-ultrasonic okugcina kuhlanganiswe ibe isampuli yamanzi ishansi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukugeza okuvamile kwe-ultrasonic noma ukuhlanzwa kwe-ultrasonic okuhlinzeka ngamandla okuphansi kakhulu kwe-ultrasound amandla ngezinga elingenalutho futhi elingaqinile. Hielscher's I-VialTweeter futhi i-CupHorn yizesekeli ze-sonication engaqondile ezinikeza amandla okugxila kakhulu e-ultrasonic nge-sonication eqondile.
Izakhi ze-Ultrasonic ezenziwe kusuka engilazi nasensimbi engagqwali
Ngomuntu ongaqondakaliyo i-ultrasonic energy idluliselwa ngodonga lwe-tube yesampula noma i-beaker phakathi. Nge-ultrasonication engaqondile, ukungcola okuphambene, i-aerosolization ne-foaming yesampula kungagwenywa. Ngakho-ke, kuyindlela ehle yokunikeza amasampuli ama-pathogenic noma oyinyumba. I-VialTweeter ye-Hielscher ne-CupHorn ngamathuluzi athembekile we-sonication ngokungaqondile ngokuqondile.
I I-VialTweeter i-sonotrode ekhethekile ye-block for the sonication yesikhashana esingaqondakali ngezikhumba ezingaphezulu kwezingu-10. Iqhutshwa yi-200W ultrasonicator ene-UP200St enamandla, imibhangqwana ye-VialTweeter kuze kube yi-watts ezingu-10 ku-vial ngayinye. I-clap encane yokufaka i-VialPress ivumela ukucindezela izitsha ezinkulu zokuhlola ngaphambili. Ngaleyo ndlela, izikhumba ezingaphezulu kwezingu-5 ezinkulu zingenziwa ngokungaqondile nge-time ngesikhathi esifanayo.
I-VialTweeter for sonication ngqo
I-ultrasonic cup horn, efana ne-UP200St-TD_CupHorn, ingasetshenziselwa ukuxhumana ngokuqondile nangokungaqondile. Isimiso sokusebenza sempondo sekhobe singafaniswa nokugeza okucwebezelayo noma ukuhlanza tank kodwa ngamandla amakhulu kakhulu e-ultrasonic. I-CupHorn isebenza njenge-sonotrode ehambisa amagagasi e-ultrasound kwisampula. Uma uphondo lwekhobe lugcwele isampula, amandla e-ultrasonic adluliselwa ngokuqondile kwisampuli esiphezulu. Ngaphandle kwalokho, uphondo lwekhobe lungagcwaliswa ngamanzi futhi amathimba wokuhlola azofakwa ebhodini lokugezela ngamanzi ngokungaqondile. Noma iyiphi indlela, i-UP200St-TD_CupHorn – iqhutshwa ngeprosesa ye-watts engu-200 – inikeza indodanaication enamandla futhi enokwethenjelwa.
Ultrasonic cup uphondo TD_CupHorn for sonication okukhulu
izesekeli ezenziwe ngezifiso
Senza izesekeli ezenziwe ngezifiso, futhi. Lokhu kufaka phakathi ama-sonotrode akhethekile noma amaseli okugeleza. Zizwa ukhululekile ukuchaza izidingo zakho ezithile emkhakheni wokuphawula kwifomu elingezansi.
I-sonotrode yomunwe emi-4 inezeluleko ezine ze-ultrasonic probe ze-sonication kanyekanye yamasampuli ama-4